Kumuu ahaa wiilkii gowracay ninkii sawir gacmeedka ka sameeyey Nebiga NNKH? | Somalilandhorta
Browse: Home / Kumuu ahaa wiilkii gowracay ninkii sawir gacmeedka ka sameeyey Nebiga NNKH?
Posted by Yasmin Ahmed on October 18, 2020 in Warar | 1 View | Leave a response
Ubaxyo la dhigay banaanka iskuulka uu dhigi jiray Sameul Paty
Faah-faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxeysa dil gowrac ah oo magaalo ku dhow magaalada Paris loogu gaystay macallin iskuul oo sawir gacmeed ka sameeyey Nebi Maxamed NNKH.
Samuel Paty, oo 47 jir ahaa, ayaa waxaa gowracay wiil 18 jir ahaa oo asal ahaan kasoo jeeda Jamhuuriyadda Chechnya ee Ruushka. Wiilkan ayaa waxaa markii dambe toogasho ku dilay booliska.
Afhayeen u hadlay Safaaradda Ruushka ee magaalada Paris, Sergei Parinov ayaa wiilka magaciisa ku sheegay Abdullakh Anzorov.
Abdullakh Anzorov ayaa Faransiiska yimid 12 sano ka hor, markaasi oo uu ahaa 6 sano jiray islamarkaana qoyskiisa ay codsadeen magan-galyo, sida uu sheegay afhayeenka. Waxa uu intaas ku daray in Abdullakh uu deganaansho helay sanadkan.
Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in wiilkaas uusan wax xiriir ah la lahayn safaaradda Ruushka.
“Muhiimadda ma ahan halka uu ku dhashay qofkan, balse waa waa goorta iyo sababta uu u qaatay fikradaha argagixisada,” ayuu yiri.
Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Abdullakh weerarka fuliyey uu doonayey inuu macallinka ku ciqaabo inuu sawir gacmeed loola jeedo Nebi Muxamed NNKH tusay ardaydiisa.
Dacwad oogayaasha ayaa sidoo kale xiray laba nin oo mid canugiisa uu dhigto iskuulka, kan kalena ay isha ku hayeen sirdoonka, kuwaasi oo la sheegay inay baraha bulshada ka billaabeen olole ka dhan ah macallinka la gowracay.
Tan iyo horraantii bishan October ayaa la sheegay in baraha bulshada uu ka socday olole ka dhan ah macallinka sameeyey sawir gacmeedka, islamarkaana waalidiin badan oo Muslimiin ah ay uga soo dacwoodeen Iskuulka.
Ma aheyn markii koowaad ee Samuel Paty uu ardaydiisa tuso sawir gacmeedka rasuulka NNKH, waxaana la sheegay in sidoo kale uu sidaas sameeyey sanadkii tegay, sida laga soo xigtay mid ka mid ah ardaydiisa oo 13 jir ah.
Qaar ka mid ah shaqaalaha Iskuulka ayaa isku dayey inay xaliyaan muranka arrintan ka dhashay, waxayna u yeereen waalidiinta Muslimiinta ah, hase yeeshee waxay sheegeen inaysan kulanka iman.
Samuel Paty ayaa ugu dambeyn la dilay Jimcihii, kadib markii uu soo weeraray wiilka 18 jirka ah, kaasi oo mindi ku dhuftay kadibna gowracay.
Halkan kadaawo kulan madaxtooyada ku dhexmarey Madaxweyne Biixi iyo Wakiilka Taiwan u fadhiya somaliland iyo arrimaha ay isla soo qaadeen halkan ka daawo→
DOWLADDA SOMALILAND OO HAKISAY WADA-XAAJOODKA IYO WADA-TASHIYADA KHUSEEYA MASHAARIICDA UN-KA EE KA SOCDA DALKA!→
Halkan ka daawo gudida qandaraasyada qaranka oo kala saaraysa shariikado 200 ka badan oo ka baratamaya qandaraasyo la baahiyey→
Xukuumadda Somaliland Jawaab ka Bixisay Eedo Loo Jeediyey Lagu Baahiyey Warbaahinta!.→